မြောက်ကိုရီးယားသို့ ရေနံတင်ပို့မှုဖြင့် ဟောင်ကောင်သင်္ဘောသားများကို တောင်ကိုရီးယားတွင် ထိန?? - Yangon Media Group
မြောက်ကိုရီးယားသို့ ရေနံတင်ပို့မှုဖြင့် ဟောင်ကောင်သင်္ဘောသားများကို တောင်ကိုရီးယားတွင် ထိန??
တောင်ကိုရီးယား အကောက်ခွန်အာဏာပိုင်များသည် ထိုင်ဝမ် ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ပိုင်ဆိုင်သော အဆိုပါသင်္ဘောကို နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင် ယိုဆူးဆိပ်ကမ်း၌ ထိန်းသိမ်းခဲ့ကြောင်း၊ ထိုအချိန်မှစ၍ သင်္ဘောသားများကို စစ်ဆေးမေးမြန်းလျက်ရှိကြောင်း တောင်ကိုရီး ယားအာဏာပိုင်များက ပြောကြားသည်။
Lighthouse Winmore ဟု အမည်ရသော အဆိုပါ ရေနံတင် သင်္ဘောပေါ်တွင် သင်္ဘောသား ၂၅ ဦး ပါဝင်ကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံ သား ၂၃ ဦးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း အာဏာပိုင်များ က ပြောကြားသည်။
ထိုသင်္ဘောသည် အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်တွင် ယိုဆူးဆိပ်ကမ်း သို့ ရောက်လာကာ ဂျပန်လောင်စာဆီ တန်ချိန် ၁၄ဝဝဝ ခန့်ကို တင်ဆောင်ခဲ့ပြီး ထိုင်ဝမ်သို့ ထွက်ခွာသွားကြောင်း၊ သို့သော် ထိုင်ဝမ် သို့ အမှန်တကယ်မသွားဘဲ တရုတ်ကမ်းလွန်
နိုင်ငံတကာရေပြင်တွင် မြောက်ကိုရီးယား သင်္ဘောတစ်စင်းအား ရေနံများလွှဲပေးပြီး ယိုဆူး ဆိပ်ကမ်းသို့ ပြန်လာခဲ့ကြောင်း အာဏာပိုင်များက ပြောကြားသည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ရလဒ်များကို ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ ၏ ဆန်ရှင်ကော်မတီထံ တင်ပြသွားမည်ဟုလည်း တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများက ပြောကြားသည်။
အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေချင်လို့ ကိုယ့်ရဲ့ Life Style ကို အကုန်လုံးချိန်းထားတယ်
ကမ္ဘာ့ရေနံစိမ်းဈေး ကျဆင်းသော်လည်း ပြန်မကျသည့် ပြည်တွင်း စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းမှာ လက်ရှိ ဒေါ်လ